Shrink Tube Vagadziri & Vatengesi | China Shrink Tube Fekitori
lkV Silicon rubber inotonhora tambanudza tambo accessories
Pfupiso: Terminal kuputira zvinhu zvinogadzirwa nemhando yepamusoro yesilicon yerabha zvinhu uye, ine yakanaka hydrophobic mashandiro, kana madonhwe mushure mezviri pamusoro, akagadzirira kupidiguka pasi, haaite firimu inoitisa yemvura uye ine hydrophobic yekuzvirapa-yega zvivakwa. Uye zvakare, ine yakasimba kuputira, kuramba, ngura kuramba uye UV kuramba, mukana wakakura ndewekuona kushandiswa kwenguva refu kwekugadzikana kwekuita. Hupenyu hurefu, hupenyu hwakafanana neiyo tambo yemuviri. Chishongedzo cabl ...
35kV Kupisa kunodzikira busbar
Heat Shrinkable Bhazi Bar Inodzivirira Kavha inoshandiswa zvakanyanya pabhazi bhaidhi yekubatanidza uye zviteshi pane iyo shanduko Yekuishandisa iyo, inogona kudzivirira pfupi dunhu, kuvhunduka kwemagetsi uye kuwedzera kushandiswa kwemidziyo yemagetsi. , Kuisa chisimbiso kwakanaka, kusimbisa mvura, yakakwira uye yakadzika tembiricha-resi mamiriro, kupfeka-kudzvinyirira zvinodiwa.Insulation Kirasi Voltage: 35kv Yakajairwa Ruvara: Tsvuku, Girinhi, Yero, Dema, Bhuruu, Yakakosha Ruvara inogona kuvezwa Ne goo ...
Kuchenesa simba rinodzikira tambo yepakati yekubatanidza
Pfupiso: A akasiyana girazi faibha yakasimbiswa epurasitiki zvigadzirwa zveganda. kunyanya 10kV imwechete core 10kV matatu epakati, 35kV imwechete core 35kV matatu epakati, 110kV, 220kV, 500kV imwechete yepakati yepakati yakabatana girazi simbi goko zvikamu zvishoma. Basa hombe regirazi faibha rakasimbiswa repurasitiki ndeyekudzivirira kukanganisa kweimwe simba rekunze uye kukuvadza kwepakati pekubatana. Yekuisa nzira: 1 gadziriro 1.1 Tarisa girazi faibha rakasimbiswa repurasitiki ganda kune iwo maratidziro uye ...
l0kV Kupisa kunodzikira busbar
Heat Shrinkable Bhazi Bar Inodzivirira Kavha inoshandiswa zvakanyanya pabhazi bhaidhi yekubatanidza uye zviteshi pane iyo shanduko Yekuishandisa iyo, inogona kudzivirira pfupi dunhu, kuvhunduka kwemagetsi uye kuwedzera kushandiswa kwemidziyo yemagetsi. Kuiswa chisimbiso kwakanaka, kusimbisa mvura, kukwirira uye kwakadzika tembiricha-resi mamiriro, kupfeka-kudzvinyirira zvinodiwa.Insulation Kirasi Voltage: 10kv Yakajairwa Ruvara: Tsvuku, Girinhi, Yero, Dema, Bhuruu, Yakakosha Ruvara inogona kuvezwa Ne goo ...
lkV yakaderera magetsi kupisa shrinkable busbar
Heat Shrinkable Bhazi Bar Inodzivirira Kavha inoshandiswa zvakanyanya pabhazi bhaidhi yekubatanidza uye zviteshi pane iyo shanduko Yekuishandisa iyo, inogona kudzivirira pfupi dunhu, kuvhunduka kwemagetsi uye kuwedzera kushandiswa kwemidziyo yemagetsi. , Kuisa chisimbiso kwakanaka, kusimbisa mvura, yakakwira uye yakadzika tembiricha-resi mamiriro, kupfeka-kudzvinyirira zvinodiwa.Insulation Kirasi Voltage: 1kv Yakajairwa Ruvara: Tsvuku, Girinhi, Yero, Dema, Bhuruu, Ruvara rwakakosha runogona kuvezwa Zvakawanda isu ...